ज्योतिष शास्त्रः विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? – Daily NpNews
फेरि लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक !
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ज्योतिष शास्त्रः विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ?
ज्योतिष शास्त्रः विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ?
ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ ।
जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार, विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ-
विहीबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र समझदार हुने गर्दछन् । तपाई विहीबार जन्मिनुभएको हाे भने मानिसहरुलाई निकै इज्जत गर्नुहुन्छ त्यसकारण तपाई आदर्श पनि हुनुहुन्छ । सफा र स्वच्छ विचारधाराको मालिक पनि हुनुहुन्छ ।
तपाईको धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र निकै कम । बिहीबार जन्मेका मानिसहरुको प्रेम विवाह हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । उनीहरुको वैवाहिक जीवन सुखमय हुने गर्दछ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विहीबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरैजसो सानो–तिनो रोगको शिकार हुने गर्दछन् जस्तै ज्वरो, पेट दुखाई अथवा टाउको दुखाईको समस्या देखिन सक्छ ।
सुत्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, अन्यथा घरमा आउनसक्छ यस्तो खतरा !
धोकेबाज हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, कतै तपाई नि त पर्नुभएन ?
काठमाडौं- संसारभरि पानीपछि सबैभन्दा धेरै पिइने पेयपदार्थ चिया नै हो ।